Haweeney lagu kufsaday Malmö - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
sawir: Johan Nilsson/TT
Haweeney lagu kufsaday Malmö
La daabacay fredag 29 december 2017 kl 13.40
Haweeney ayaa xalay si ba'an loogu kufsaday magaaladda Malmö iyda oo laga shakisan yahay in kufsiga ay geysteen dhowr nin, sida uu oo qoray wargeyska Sydsvenskan
Sida uu soo daabacay wargeyska Sydsvenskan, haweeneyda ayaa waxaa weeraray oo kufsaday dhowr nin hase yeeshee waxaa u suuragashay in ay iyada qudheeda la xiriirto bileyska marka ay timid xaafadeeda.
Ka dib markii ay wacday booliiska ayaa haweeneyda dhibaatada loo geystay, waxaa loo qaaday cisbital si loo baaro waxaana lagu waramayaa in dhaawacyada gaaray ay yihiin kuwa aan si saa'id ah khtar u ahayn.
- Waxaa ina soo gaaray dacwad kufsi xoogan. Dhibanaha waa dumar ka weyn da'da 18 sano, waxaa sidaasi yiri Nils Norling oo ka tirsan booliska magaaladda Malmö mar uu la hadlay Tvga SVT.
Booliska ayay soo gaartay qeyladhaanta kufsiga marka ay saacaddu ahayd kowdii habeenimo, waxuuna dambiga ka dhacay xaafadda Högaholm. Booliska ayaa aaga xirtay si ay u sammeeyaan baaritaano farsamo.
Shur saxaafadeed ay booliska qabteen, barqadii maanta ayay waxa ay ku sheegeen in xaalada hadda jirta aysan u muuqan in ay kufsigani xiriir la leeyahay kiis kufsi oo hore ugu dhacay magaaladda Malmö.
Booliska ayaa weli u soo qaban cid dhacdada xalay inkastoo ay gacanta ku hayaan raadad. Bileyska ayaan dooneen in ay sii daayaan xogta tirada dambiilayaasha laga shakisan yahay in ay ku lug leeyihiin kufsigii xalay.
Mats Karlsson, oo kaaliye u ah madaxa booliska Malmö, ayaa ku baraarujiyay dhammaan bulshada deegaanka kufsiga uu ka dhacay in ay noloshooda si caadi ah u wataan, waxuuna sheegay in booliska ay sii wadi doonaan ilaalada ay ku maraan aagaasi.
- Tani waxaa loo sammeynayaan in xog marag fur ah laga hlo dadka socsocda ee aagaasi, ayuu yiri Matts isagoona ku sii daray oo yiri:
- Waa dambi aad khtar u ah waxaana u baareynaa si weyn ugu ballaaran ee suurtagalka ah.
Booliska magaaladda Malmö ayaa hore u baarayay saddex kufsi oo waaweyn oo ka duwan oo rag tira badan u geysteen dumar magaaladda ku nool. Labo ka mid ah dcwada kufsiyda ayaa la soo gaarsiiyay booliska ishii Nofember halka midka saddexaadna la oo gaarsiiyay bartamihii Disemmber, kaasi oo ahaa mid rag fara badan ay ku weerareen gabar 17 ir goob lagu ciyaro oo ku taalla xaafadda Sofielund.
- Baaritaano ayaa ku socda kiisaskaasi kala duwan, qeybta inoo qaabilsan xog shaqsiyad ka sammeynta cida dambiga uu ka dhici karana waxay toddobaadka soo socda soo gudbin doontaa warbixintooda iyaga oo kaashana khibradooda, ayuu yiri Mats Karlsson.
Booliska ayaa ku shaqeynaya aragtida ah in damiilayal kala duwan in ay geysteen sadexda kufsi ee hore.